ယူရိုစတား, ပိတ်ချိန်များအတွင်းလက်မှတ်စျေးနှုန်းချိုသာသည်, ရက်သတ္တပတ်၏အစမှာ, နှင့်တစ်နေ့တာအတွင်း. ရက်သတ္တပတ်၏အလယ်ရထားခရီးစဉ် (အင်္ဂါနေ့, ဗုဒ္ဓဟူးနှင့်ကြာသပတေးနေ့) မကြာခဏစျေးအသက်သာဆုံးစျေးနှုန်းများပေးထားပါတယ်. အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းများအတွက်, Eurostar ကိုမနက်အစောပိုင်းနှင့်တစ်ပတ်အတွင်း၌မယူပါနှင့် (အများအပြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းခရီးသွားများအတွက်ကြောင့်), သောကြာနေ့နှင့်တနင်္ဂနွေညနေပိုင်းများတွင် Eurostar စီးနင်းခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ပါ (တနင်္ဂနွေ getaways များအတွက်အဆင်သင့်), စဉ်အတွင်း အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များနှင့်ကျောင်းပိတ်ရက်များတွင်လည်းဖြစ်သည် Eurostar skyrocket ၏စျေးနှုန်းများ.
Eurostar ရထားများမှာမည်သည့်ဘတ်ဂျက်အတွက်မဆိုတည်ဆောက်ရန်လူတန်းစားဝန်ဆောင်မှုများစွာရှိသည်, နှင့်ခရီးသွားမဆိုအမျိုးအစား, whether you areabusiness traveler or leisure or both 🙂
ဒီလက်မှတ်အတန်းဟာ Standard Eurostar လက်မှတ်အမျိုးအစားထက်ပိုပြီးစျေးကြီးသည်, အဆိုပါ ပရီးမီးယားလိဂ်စံလက်မှတ် နောက်ထပ်ဝန်ဆောင်မှုများကိုကမ်းလှမ်း. ကျွန်ုပ်တို့အထက်တွင်ရေးသားခဲ့သော Standard လက်မှတ်များ၏အားသာချက်များအပြင်, ပရီးမီးယားလိဂ်စံလက်မှတ်များသည်နေရာထိုင်ခင်းပိုမိုများပြားသည့်ထိုင်ခုံများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်, ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်မဂ္ဂဇင်းများနှင့်သတင်းစာများကိုအခမဲ့ပေးသည်, သင်သည် Eurostar ပေါ်ရှိသင်၏စားသောက်ခန်းသို့ပေါ့ပေါ့တန်တန်အစာနှင့်သောက်စရာများကိုရရှိသည်. ပရီးမီးယားလိဂ်စံလက်မှတ်များကိုသင်၏ခရီးစဉ်ပေါ် မူတည်၍ အခကြေးငွေဖြင့်ပြုပြင်နိုင်သည်.
– ရပြီဆိုရင် 500 မှတ်: မင်းရနိုင်တယ် 1 ရထားဝန်ဆောင်မှုအဆင့်မြှင့်.
အမ်စတာဒမ် Centraal (အမ်စတာဒမ်ဗဟိုစခန်း) အမ်စတာဒမ်မြို့လယ်တွင်မြစ်၏ဘေးတွင်တည်ရှိသည်, သင်ဘူတာရုံကထွက်တဲ့အချိန်မှာ, အမ်စတာဒမ်ပင်မလမ်းသည် Madame Tussauds ကဲ့သို့သောဆွဲဆောင်မှုများနှင့်ပြည့်နှက်နေပြီးအနီရောင်ခရိုင်နှင့်လည်းမတွေ့ရပါ. များစွာသောဥရောပရထားလမ်းဘူတာများတွင်ရှိသကဲ့သို့, သင့်မှာခရီးသွားချင်တယ်ဆိုရင်စောစောစီးစီးဖွင့်ပြီးအိတ်ကိုဖွင့်တဲ့အိတ်သိုလှောင်ရုံတွေရှိတယ် 1 သင်၏ဟိုတယ်တွင်နေ့လည်စာစားနိုင်သည်.
Antwerp ဗဟိုဘူတာ သင်သည် Antwerp ရှိ Eurostar ကိုဘယ်လ်ဂျီယံတွင်ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့အဖြစ်သတ်မှတ်သည်, သင် Antwerp ကနေခရီးသွားလာလျှင်, သင်အမှန်တကယ်အကြံပြုထားသည်ထက်ပိုရှည်ဘူတာရုံသို့လာရန်အကြံပြုပါသည် 1 ဒီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ထွက်ခွာမီနာရီ မီးရထားဘူတာရုံသည်အလှဆင်ခြင်းအတွက်ဆုများရရှိခဲ့သည် နှင့်ဗိသုကာကရှိပါတယ်5ကြမ်းပြင်နှင့်၎င်း၏အတွက်သွားလာရန်အလွန်ကောင်းတဲ့.
ဤစာမျက်နှာကိုသင်၏ဆိုဒ်သို့ embed လုပ်ချင်ပါသလား? ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-eurostar%2F%0A%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း), ဒါမှမဟုတ်ဒီစာမျက်နှာကိုတိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်လို့ရတယ်.